» “सासुको नि’धन भएपछि किरिया, बसेकी पार्वतीको यसरि मृत्यु, केहि दिनमै, जब रहस्य खुल्यो, गाउँलेहरूले उठाए आवाज (भिडियो)’ “सासुको नि’धन भएपछि किरिया, बसेकी पार्वतीको यसरि मृत्यु, केहि दिनमै, जब रहस्य खुल्यो, गाउँलेहरूले उठाए आवाज (भिडियो)’ – हाम्रो खबर
“सासुको नि’धन भएपछि किरिया, बसेकी पार्वतीको यसरि मृत्यु, केहि दिनमै, जब रहस्य खुल्यो, गाउँलेहरूले उठाए आवाज (भिडियो)’
“काठमाडौ । श्रीमान श्रीमतीको राम्रो सम्बन्ध थिएन । श्रीमानले आफ्नै मामाको छोरी बहिनीलाई सौता ल्याएका थिए । उनी आफ्नो सुर गरेर एक्लै बसेकी थिइन् । भरतपुर ६ मा भएको एउटा घटना भएको छ । दुई दिन अघि सासुको निधन भएपछि पार्वती भट्टराई किरिया बसेकी थिइन् । उनको त्यही बेलामा ज लेर निधन भएको छ । तर पार्वतीका माइतीले भने रहस्यमय भएको बताएका छन् ।”
“भाई वुहारी सम्झना ढकालले भनिन्, सुतीको कपडा लगाएर किरिया बसेको महिलाको तोरी राखेर बालेको बत्तीले कसरी आगो लाग्यो भन्ने शंका लाग्यो । उनले मान्छे माथि कसरी शंका गर्नु ? यस्तो घटना कसरी भयो भन्ने कुरामा शंकामा छौं ।”
“उनको भदा बुहारीले पनि घटना संकास्पद भएको बताइन् । उनले घटना भएको बेलामा आफुले नदेखेपनि घटना भइसकेपछि आफुलाई बोलाएको र जाँदा गाडीमा राखिएको थियो ।”
“पार्वती भट्टराई आत्तिएको अवस्थामा आफुले देखेको बताइन् । मलाई आमाले संगै संगै लैजान थाल्नुभयो । म जान्छुहोला भन्नुभएको थियो, वुहारीले भनिन् । परिवारमा उनको सम्बन्ध त्यती राम्रो नभएको उनीहरुले बताएा छन् । धेरे वर्ष भयो दिदी र भिनाजु अलग बस्न थालेको उनले बताइन् । एक वर्ष देखि श्रीमान घर बनाएर नजिकै सरेको बताइन् ।”
“छिमेकीहरुले पनि घटना रहस्यमय भएको बताएका छन् । उनीहरुले त्यती ठूलो घटना हुँदा पनि एउटै घरमा भएका अरुले किन थाहा पाएनन् ? स्थानिय छिमेकीको भनाई छ । बाँकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस”